အမျိုးသားများအတွက် Cellulite, အကြောင်းပြချက်များနှင့်စဉ်းစားရန်အကြံပြုချက်များ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ယောက်ျားမှာ cellulite ရှိလား။
cellulite သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သာဖြစ်သည်ဟူသောယုံကြည်ချက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိသည်။ ဒါဟာတကယ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး ယောက်ျားတွေလည်းဒီမကောင်းမှုကိုခံရဖို့ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြသည်.
ငါတို့အတွက်အားသာချက်ကတော့ ၉၀% သောရောဂါတွေဟာမိန်းကလေးတွေမှာဖြစ်တာကြောင့်ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်အချည်းနှီးသောမျက်စိဖြင့်သတိမထားမိကြပါ.
အခြေခံအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် - ဆယ်လူလာတစ်ရှူးရောင်ခြင်း အထူးသဖြင့်ပေါင်၊ တင်ပါးနှင့်ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းတို့တွင်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းရင်းများ ဘာလို့ cellulite ပေါ်လာရတာလဲ။
ဟော်မုန်းပြproblemsနာများတိုက်ရိုက်တစ်သျှူးများတွင်အဆီစုဆောင်းခြင်းအဖြစ်အရည်၏ retention ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အစာအာဟာရချို့တဲ့ခြင်းဖြေ - အညစ်အကြေးနှင့်အဆီဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သူများသည်ဤပြproblemsနာများ (နှင့်များစွာသောအခြားသူများ) ၏ဝေဒနာခံစားရလေ့ရှိသည်။
မလေ့ကျင့်ပါနဲ့။ ကြွက်သားများတွင်လေ့ကျင့်ခန်းများမရှိခြင်းသည် cellulite ၏အသွင်အပြင်ကိုနှစ်သက်သည်။
အကြောင်းပြချက်မှာရိုးရှင်းပါသည် ငါတို့မှာပိုထူတဲ့အသားအရေရှိတယ် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကြီးထွားလာသောမမှန်မှုများလျော့နည်းစေသည်အမျိုးသမီးများထက်။ သို့သော်ထိုသို့သာဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှု။ အနီးကပ်တက်နှင့်ထိတွေ့ရန်ကတန်ဖိုးထားနိုင်ပါတယ်။
မှန်ကန်သောအစားအစာအပြင်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ခြင်းမှရှောင်ရှားခြင်းအပြင် cellulite ၏အသွင်အပြင်ကိုရှောင်ရှားရန်စဉ်းစားရန်အခြားအစီအမံများရှိပါသည်။
အားလုံး၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သော mesotherapy, pressotherapy နှင့် lymphatic အနှိပ်အဖြစ်အခြားရွေးချယ်စရာအလေ့အကျင့်ကိုအသုံးပြုခြင်း သွေးလည်ပတ်မှုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်အဆိပ်ဖယ်ရှားပစ်။
အသုံး အစိုဓာတ်။ အသားအရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုသည်အမျိုးသမီးများအတွက်သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကပင်ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ခြောက်သွေ့မှုသည် cellulite ပါဝင်သောပြproblemsနာများကိုမကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေသည်။
cellulite ဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အရာပဲလား။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ သင်ဂရုစိုက်ရမည်။
ပုံရိပ်ရင်းမြစ် - အယ်လ်ပါစ် / မိနစ် ၂၀
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » ကျန်းမာခြင်း » ယောက်ျားမှာ cellulite ရှိလား။
Gosha Rubchinskiy lookbook ဆောင်း ဦး ရာသီ / ဆောင်းရာသီ 2017-2018 - ရုရှားမှအားကစားဖျော်ဖြေမှု